အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Apr 13, 2012
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, April 13, 2012 Friday, April 13, 2012 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
အိပ်ရာပေါ်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေသော သက်ထားနှာခေါင်းထဲသို့ မွှေးပျံ့သော ရနံ့တစ်မျိုးက ဝင်ရောက်လို့လာသည်။ ပထမတော့ အိပ်မောကျနေသည့်အတွက် အိပ်မက်ထဲမှာလိုလို ထို ရနံ့ကို ခံစားနေရသော်လည်း မည်သည့်အနံ့ဆိုသည်ကို သေချာ ခံစားသိမိလိုက်သည်တွင် အိပ်မောကျနေရာမှ အသိစိတ်တို့က ဖြတ်ခနဲ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာရတော့သည်။ သေချာပါပြီ။ ထိုသင်းပျံ့ပျံ့ ရနံ့သည် ပိတောက်ပန်း ရနံ့သာ ဖြစ်ပေမည်။ ဧပရယ်လဖြစ်သည်မို့ လွန်ခဲ့သည့် ရက်တွေတုန်းက ပိတောက်ပန်းတွေ ဖူးနေသည်ကို သူမ မြင်ခဲ့ရဖူးသည်။ မျက်စိနှစ်လုံးကို အသာအယာဖွင့်လိုက်ပြီး အခန်းတွင်းကို လှည့်ပတ် ကြည့်လိုက်သော်လည်း သူမ ထင်ထားသလို ပိတောက်ပန်း တစ်ပွင့်တစ်လေမှ ရှိမနေပါ။ ပြင်ပမှ ဝင်လာသည့် ရနံ့ဟု ဆိုရအောင်ကလည်း သူမအခန်း၏ ပြူတင်းပေါက် တို့သည်လည်း စေ့စေ့ ပိတ်လျှက် သား ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုပိတောက်ပန်းတို့၏ ရနံ့မှာ ဘယ်နေရာက လာသည် ဆိုသည်ကို သူမ သေချာသိပါသည်။
မျက်နှာသစ် အဝတ်အစား လဲပြီးသည်နှင့် အိမ်ကနေ ဘယ်သူ့ကိုမှ အဖော်မခေါ်ဘဲ တစ်ဦးတည်း ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ သက်ထားခြေလှမ်းတို့ ဦးတည်ရာသည်ကား သက်ထားတို့မြိုကလေး၏ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော သုဿန်ကို ဖြစ်လေသည်။ သူမ မျှော်လင့်ထားသည့် အတိုင်းပင် မြို့ကလေး၏ တစ်ခုတည်းသော သုဿာန်သို့ ရောက်သည်တွင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှပင် တစ်ပင်လုံး ဝင်းဝါနေသော ပိတောက်ပန်းပင်ကြီးကို မြင်နေရလေပြီ။ ပိတောက်ရနံ့တို့ကလည်း အနီးနား ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး မွှေးပျံ့ သင်းကြိုင် နေတော့သည်။ ပိတောက်ပန်းတို့ကို မြင်သည့်အခါတွင် အခြားသူများလို ကြည်နူး ဝမ်းသာစိတ်များ ဖြစ်မလာဘဲ ဝမ်းနည်းသည့် ခံစားမှုတို့က သူမရင်ထဲမှာ ဆို့ကြပ်လာတော့သည်။ တစ်ပင်လုံး ပွင့်နေသော ပိတောက်ပင်ကြီး အောက်တွင်တော့ အုတ်ဂူဖြူဖြူတစ်လုံး။ ထိုအုတ်ဂူတွင် ထင်ထင်ရှားရှား ရေးထိုးထားသည့် စာတန်းမှာ
အုတ်ဂူရှိရာဆီသို့ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်သွားသည့် သူမခြေလှမ်းတို့က လေးကန်ဖင့်နွဲ့လို့နေသည်။ သို့သော် သူမခြေလှမ်းတို့ကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါ။ ထို အုတ်ဂူရှေ့ကို ရောက်အောင် သွားရပါမည်။ အုတ်ဂူအနီး ပတ်လည်တွင် ပိတောက်ပွင့်ကြွေတို့ကို နေရာအနှံ့တွေ့ရသည်။ ဖြူလွလွ အုတ်ဂူပေါ်တွင် လည်း ပိတောက်ပန်းတို့က ဖွေးလို့နေလေပြီ။ အုတ်ဂူပေါ်က ပိတောက်ပွင့်ကြွေတို့ကို လက်ဖြင့် ဖွဖွ ကောက်ယူ မိတော့ သူမ ရင်တွင်းတစ်နေရာက တဆစ်ဆစ် ကိုက်ခဲလို့ လာသည်။ တကယ်တမ်းတွင် သက်ထားသည် ပိတောက်ပန်းတို့ကို ဟိုးယခင်က အလွန် နှစ်သက်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုအချိန်တွင်တော့ အမုန်းဆုံးပန်း ဖြစ်နေလေပြီ။ သို့သော်လည်း ပိတောက်ပွင့်ချိန် ရောက်တိုင်း ဒီနေရာကို သူမ လာမြဲတိုင်း လာနေပါဦးမည်။ သူမ စိတ်နှလုံးတို့ ဒီပိတောက်တစ္ဆေ ခြောက်ခြင်းကနေ ကင်းလွတ်ခွင့်မရမချင်း ပိတောက်ပန်း တို့ကို မုန်းတီးနေရဦးမည်သာ။ အုတ်ဂူဘေးတွင် ထိုင်ချလိုက်ကာ နာကျင်သော စိတ်နှလုံးဖြင့် စကားလုံးတစ်ချို့ကို နှုတ်ဖြင့် ရွတ်ဆိုမိတော့သည်။
“ကျော်စိုးရယ်.. နင်ငါ့ကို ခုထိ မမေ့သေးဘူးလားဟင်.. လွတ်ရာကျွတ်ရာကို သွားပါတော့လား။ ဒီပိတောက်ပန်းတွေနဲ့ ငါ့ကို တစ္ဆေတစ်ကောင်လို မှီတွယ်မနေပါနဲ့တော့လား။ နင့်ဘဝရဲ့ လွတ်လပ်ရာကို ထွက်ခါသွားပါတော့လား ” သူမ ပါးစပ်က ပလုံးပထွေး အသံထွက်နေမိရင်းက ရှိုက်ကြီး တငင်ဖြင့် တသိမ့်သိမ့်လှုပ်ကာ ငိုကြွေးနေပါတော့သည်။
အုတ်ဂူဘေးတွင်ထိုင်ကာ သည်းသည်းထန်ထန် ငိုကြွေးနေသော သူမကို သုဿန်ရှေ့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ တို့မှာ မြင်လေတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသည်။ လူတိုင်းကလည်း “သက်ထားတစ်ယောက် ကျော်စိုးကို သတိရသဖြင့် ငိုကြွေးနေသည်၊ သက်ထားသည် အလွန်အချစ်ကြီးပြီး ကျော်စိုး ကွယ်လွန်သည်မှာ ၇နှစ်ခန့်ပင် ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယခုထိ သူမမှာ မမေ့နိုင်သေး၊ ကျော်စိုးကို ချစ်စိတ်ဖြင့် သက်ထား တစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်မထပ်နိုင်သေး” ဟု ဆိုကြကာ ပို၍ သနား ကရုဏာ သက်ကြလေသည်။ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြသည်။ ပိတောက်ပွင့်ချိန်ရောက်တိုင်း ပိတောက်တွေ တစ်ပင်လုံးဝေနေသော ဒီ ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်မှာ လာလာငိုတတ်သည့် သက်ထားအကြောင်းကို လူတိုင်းက သိနေကြလေပြီ။ ပိတောက်ပွင့်ချိန်တွင် မြင်ရသည့် ကြေကွဲစရာ မြင်ကွင်းဖြစ်လေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ပိတောက်ပွင့်ချိန် တိုင်း သက်ထားတစ်ယောက် ဒီအုတ်ဂူ ဖြူဖြူဘေးနား လာငိုရပါသနည်း ဟု မေးလာ လျှင် ကျော်စိုးသည် လွန်ခဲ့သော် (၇)နှစ်က ယခုလို ပိတောက်ပွင့်ချိန်တွင် ကွယ်လွန်သွား ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
ထို အုတ်ဂူဖြူဖြူနှင့် ပိတောက်ပင်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာရာ ဇာတ်လမ်းမှာ လွန်ခဲ့သော ( ၇)နှစ်က…..
ထိုအချိန်သည် သက်ထားတစ်ယောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရပြီး သူမတို့မြို့ကလေးရှိ ဘဏ်တစ်ခုတွင် အလုပ် စဝင်နေချိန် ဖြစ်လေသည်။ ဘွဲ့ရပြီးကာစ အသက် ၂၂ အရွယ် သူမသည် ပျိုမြစ်နုနယ် ချစ်စဖွယ် ချောမောသူလေး ဖြစ်သောကြောင့် သက်ထားကို ပိုးပန်းကြသူ အလွန်များပြားလေသည်။ မိန်းခလေးပီပီ ပန်းကြိုက်တတ်သော သက်ထားသည် သင်္ကြန်အကြိုနေ့မနက်စောစောတွင် သူမတို့အိမ်နှင့် ၃အိမ်ခန့်အကွာရှိ လူမနေသော ခြံကျယ်ကြီးတစ်ခု၏ ခြံစည်းရိုးနားက တစ်ပင်လုံး ပွင့်ဝေနေသော ပိတောက်ပင်ကြီးပေါ်က ပိတောက်ပန်းတွေကို တွေ့မြင်ပြီး အလွန် ပျော်ရွှင်မိလေသည်။ ညတုန်းက မိုးရွာသည်ကို သူမ သတိရလိုက်ပြီး ထိုမိုးကြောင့် ပိတောက်ပန်းတို့ ပွင့်ကြလေပြီ။ သူမ အလုပ်သို့ သွားလျှင် ပိတောက်ပန်းများ ပန်ဆင်သွားလိုသည့်စိတ်ဖြင့် အလုပ်မသွားခင်တွင် ထို ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်သို့ ရောက်လာမိတော့သည်။
အပင်ကြီးက အတန်ငယ်မြင့်သောကြောင့် အပင်ပေါ်တွင် ပြွတ်ခဲစွာပွင့်နေသော ပိတောက်ပန်းတို့ကို လိုချင်မိသော်လည်း မည်သို့မည်ပုံ ခူးရမှန်းမသိဖြစ်ကာ သူမအရပ်ဖြင့် ပိတောက်ကိုင်း တစ်ခုတလေကို မှီလိုမှီငြား ခုန်ဆွ ခုန်ဆွဖြင့် လုပ်နေမိတော့သည်။ အနိမ့်ပိုင်းရှိ အကိုင်းများတွင် အပွင့်များ မရှိတော့ပေ။ ကြည့်ရသည်မှာ မနက်ခင်းစောစောတွင် ပိတောက်ပန်းများကို ဈေးတွင် ရောင်းချင်သူများက ဝိရိယကောင်းကောင်းဖြင့် လာခူးသွားကြဟန် ရှိသည်။ မြေပြင်ပေါ်တွင်လည်း သစ်ရွက်စိမ်း တစ်ချို့နှင့် ပိတောက်ပွင့်ကြွေများက ပြန့်ကျဲလို့နေသည့်အတွက် အပွင့်ကြွေတစ်ခုကို ကောက်ယူကာ နမ်းရှိုက်မိတော့ ပိတောက်ပန်း၏ ချိုအီသင်းထုံသော ရနံ့က သူမ နှလုံးသားထိတိုင် မွှေးပျံ့သွားသည်ဟုပင် ထင်မိလေသည်။
သို့သော် သူမ လိုချင်သည်က ပိတောက်ပွင့်ကြွေ မဟုတ်ပါ။ အရွက်စိမ်းစိမ်းတို့ ဝန်းရံနေသော ပိတောက်ခက်ကို လိုချင်မိလေသည်။ အပင်ပေါ်ကို မော့ကြည့်ရင်း ထိုပိတောက်ပန်းကို ရနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို စဉ်းစားနေမိသည်။ သက်ထားတို့အိမ်နှင့် ထိုပိတောက်ပင်ကြီးရှိရာ လမ်းသည် လမ်းမကြီး မဟုတ်ဘဲ လမ်းသွယ်ကလေးသာ ဖြစ်သောကြောင့် လူသွားလူလာ အတန်ငယ် ရှင်းသည့်လမ်း ဖြစ်လေ သည်။ ထို့ကြောင့် သက်ထားမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အကူအညီ တောင်း ဖို့ တွေ့လိုတွေ့ငြား မျှော်ကြည့် မိသော်လည်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူသူမရှိ ဖြစ်နေလေ သည်။ ထိုစဉ်မှာ သူမကို ချစ်ခင် နှစ်သက်လှ ပါချည်ရဲ့ ဆိုကာ ချစ်ကြောင်း၊ ကြိုက်ကြောင်း ဖွင့်ပြောကာ တစ်ဂျီဂျီဖြင့် အဖြေတောင်း ထားသော ကျော်စိုးကို က ထိုလမ်းသွယ်ရှေ့သို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖြတ်လာရာ ပိတောက်ပင်အောက်မှာ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွလုပ်နေသော သွယ့်ကိုမြင်သွားပြီး ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်လိုက်ကာ သက်ထားကို “ဘာလုပ်နေတာလဲ”ဟု လှမ်းမေးလေသည်။ တကယ်တမ်းတော့ ကျော်စိုးသည် သူမ အလုပ်သွားမည့်အချိန်ကို မှန်းကာ သူမတို့ အိမ်အနီးမှာ လာစောင့်နေခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
အမှန်ပြောရလျှင် သက်ထားသည် ကျော်စိုးကို ကို နည်းနည်းလေးမှ စိတ်မဝင်စားပါ။ အသားဖြူဖြူ လူပုံခပ်နွဲ့နွဲ့ ကျော်စိုးမှာ ဆံပင်ရှည်ရှည်ထားတတ်သဖြင့် သူမမျက်စိထဲ မိန်းခလေးဆန်သည်ဟု ထင်ကာ ထိုပုံစံမျိုးကို စိတ်မဝင်စားသော သက်ထားအတွက်တော့ ကျော်စိုးကိုကို ချစ်သူအဖြစ် စိတ်ကူးလို့မရဘဲ သာမန် လူတစ်ယောက်ထက် မပိုခဲ့ပါ။ ကျော်စိုး သူမကို ချစ်ကြောင်း ဖွင့်ပြောခဲ့သည်မှာ ကြာလှပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူမဖက်က တစ်ခါမှ စဉ်းစားဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဖူးပါ။ အခါတိုင်း ဆိုလျှင် ကျော်စိုးကိုကို အဖက်လုပ်ပြီး ပြန်ဖြေချင်မှ ဖြေမည်ဖြစ်သော်လည်း ဒီနေ့တော့ဖြင့် အပင်ပေါ်က ပိတောက်ပန်းတို့ကို လိုချင်စိတ်ကြောင့် အားကိုးရလိုရငြား “ပိတောက်ပန်းလိုချင်လို့” ဟု ပြန်ဖြေ လိုက်မိသည်။ ကျော်စိုးက ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ ဆင်းလာပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်ကြည့်ကာ ဝါးလုံး သို့မဟုတ် တုတ် တစ်ခုခု တွေ့လိုတွေ့ငြား လိုက်ရှာနေသည်။ သူ့အရပ်မှာလည်း သက်ထားအရပ်နှင့် သိပ်မကွာသည်မို့ အပင်ပေါ်က ပိတောက်ပန်းကို မမှီ့တမှီ။
ထိုစဉ် သက်ထားက လက်တွင်ပတ်ထားသော နာရီကို ကြည့်လိုက်မိပြီး အလုပ်သွားရန် အချိန် နီးနေပြီကို သတိရလိုက်မိကာ ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် တီရှပ်ကို ရှိုးအပြည့် ဝတ်ထားသော ကျော်စိုးကိုကြည့်ရင်း “ ကျော်စိုးရယ် အပင်က သိပ်မမြင့်ပါဘူး. နင်အပင်ပေါ် တက်ခူးပေးပါလား” ဟု ပြောမိတော့
“ဟာ.. ငါ သစ်ပင်ပေါ် မတက်ရဲဘူး။ တစ်ခါမှလည်း သစ်ပင်မတက်ဖူးဘူး” ဟု ကျော်စိုးက ပြန်ပြောလေသည်။
“အမလေး။ ဖြစ်ရလေတယ်။ ငါက မိန်းခလေးဖြစ်နေလို့။ သစ်ပင်တက်ဖို့ မသင့်တော်လို့။ ထမီကြီးနဲ့ တက်ဖို့လည်း မဖြစ်လို့။ မဟုတ်ရင် တက်ပြီးတာ ကြာပြီ။ ဒီသစ်ပင်တက်တာများ ဘာများ ခက်တာမှတ်လို့။ ဒီခြံစည်းရိုးကနေ တစ်ဆင့် တက်လိုက်ရင် လွယ်လွယ်လေးဟာကို။ ကျော်စိုး နင်က မတက်ရဲရအောင် ယောက်ျားလေး မဟုတ်ဘူးလား။ ငါက အလုပ်သွားရင် ပိတောက်ပန်းလေး ပန်သွားချင်လို့ပါဆိုမှဘဲ ဖြစ်နေလိုက်တာ”
သူမက စိတ်ပေါက်ပေါက်ဖြင့် ပြောလိုက်မိသော စကားက ကျော်စိုးကို တွေဝေသွားစေပြီး ခဏမျှ စဉ်းစားသလို လုပ်နေကာ “ ကဲ တက်မယ်ဟာ. နင်ဒီလောက် ရချင်တယ်ဆိုမှတော့ ငါတက်ခူးပေးပါ့မယ်” ဟု ပြောလိုက်ကာ စီးထားသော ရှုးဖိနပ်ကို ချွတ်လိုက်ပြီး ခြံစည်းရိုးသံပန်းကို ဖြေးဖြေးချင်း တက်ပြီး သစ်ပင်ခွကြားသို့ ရောက်သွားတော့သည်။ ပုံမကျ ပန်းမကျ အပင်ပေါ်တက်နေသော ကျော်စိုးကို ကြည့်ပြီး သက်ထားစိတ်ထဲ ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်မိသော်လည်း ကျော်စိုးကို အားနာသဖြင့် အတင်းကို မျက်နှာပိုး သတ်ထားရသည်။ သစ်ပင်ခွကြားပေါ်မှ သစ်ကိုင်းများပေါ် ဆက်တက်ဖို့ တော်တော် ခက်ခဲနေဟန်ဖြင့် ကျော်စိုးမှာ အတန်ကြာ ရပ်တန့်နေသည်ကို တွေ့သဖြင့် “ကဲ နင်မတက်ရဲရင်လည်း ဆင်းခဲ့တော့ဟာ။ ” သူမက စိတ်မရှည်စွာဖြင့် အော်လိုက်တော့ သစ်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်ကို တွယ်တက် လိုက်တော့သည်။ ပိတောက်ပင်မှာ အကိုင်း ခပ်နိမ့်နိမ့်တွင် အပွင့်များမရှိဘဲ အနည်းငယ် မြင့်သော နေရာတွင်သာ ပြွတ်ခဲနေအောင် ပွင့်လျှက်ရှိသည့်အတွက် ကျော်စိုးမှာ အကိုင်း ခပ်မြင့်မြင့်ထိ တက်ရလေသည်။
အပင်ပေါ်မှလူက မည်သည့်အကိုင်းတွင် ပန်းရှိသည်ကို သေချာ မမြင်ရသဖြင့် အောက်မှ သက်ထားက ဟိုနားမှာ ၊ ဒီနားမှာစသဖြင့် အော်ဟစ်ပေးရသည်။ ကျော်စိုးက ချိုးချပေးလိုက်သည့် ပိတောက်ကိုင်းလေး များကို သူမက လိုက်ကောက်ပြီး တစ်နေရာတွင် စုပုံထားလိုက်သည်။ ပန်းခက်များ များများရနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားတင်ဖို့ပါ သူမက စိတ်ကူးလိုက်မိသည်။ ထို့နောက် အပင်ပေါ်သို့ မော့ကြည့်လိုက်ပြီး “ ကျော်စိုးရေ နောက်တစ်ခက် နှစ်ခက်ဆို တော်ပြီနော်။ နင်ဆင်းခဲ့လို့ရပြီ” ဟု လှမ်းအော်ရင်း မြေပြင်ပေါ် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချပြီး စုပုံထားသည့် ပန်းခက်များကို တယုတယဖြင့် တစ်ခက်ချင်းကို ကောက်ယူကာ ပွေ့ပိုက်နေလိုက်သည်။
ထိုအချိန်မှာ သစ်ပင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းရန် ပြင်နေသော ကျော်စိုးမှာ မိုးရေကြောင့် ခပ်ချောချော ဖြစ်နေသော အကိုင်းကို နင်းမိသောကြောင့် ခြေချော်ကာ ဟန်ချက်ပျက်သွားပြီး ပိတောက်ပင်ပေါ်မှ မမျှော်လင့်ဘဲ ဝုန်းကနဲ ပြုတ်ကျလေတော့သည်။ အောက်ကို ငုံ့ကာ ပိတောက်ပန်းခက်များကို ကောက်ယူနေသော သက်ထားသည် ကျော်စိုးကို သစ်ပင်ပေါ်မှ ရုတ်တရက် ပြုတ်ကျသည့်အသံကို ကြားသည်နှင့် အထိတ်တလန့်ဖြင့် ကျော်စိုးရှိရာသို့ အပြေးသွားကာ သွားကြည့်မိတော့ မြေပြင်ပေါ်တွင် ခွေခွေလေး လဲနေသော ကျော်စိုးကို တွေ့လိုက် ရလေသည်။ ကျော်စိုးနာမည်ကို အော်ဟစ်ကာ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ချိန်တွင်တော့ ကံဆိုးလှစွာပင် ကျော်စိုးပြုတ်ကျရာ နေရာတည့်တည့် သူ့ ဦးခေါင်းအောက်တွင် အတန်ငယ်ကြီးသည့် ကျောက်တုံးတစ်တုံးကို တွေ့လိုက်ရပြီး ထို ကျောက်တုံးဖြင့် ဦးခေါင်း ဆောင့်မိကာ ဦးခေါင်းဆီမှ နီရဲနေသော သွေးများတစ်စိမ့်စိမ့်ထွက်နေသည်ကို မြင်လိုက်ရလေသည်။ သွေးမြင်လျှင် မူးတတ်သည့် သက်ထားမှာလည်း "ကျော်စိုး၊ ကျော်စိုး" ဟု လှုပ်နှိုးနေရင်းဖြင့်ပင် မြေပြင်ပေါ် ခွေလဲ ကျသွားတော့သည်။
သက်ထား သတိရလာသည့်အချိန်တွင် အိမ်ရှိ သူမ၏ အိပ်ရာထက်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး သက်ထားညီမ ကေသီက ဝမ်းနည်းဖွယ် အခြေအနေ အားလုံးကို ပြောပြတော့သည်။ ကျော်စိုးကို ကားဖြင့် ဆေးရုံသို့ တင်ခေါ်လာရာ ကျော်စိုး၏ ဦးခေါင်း ဒဏ်ရာမှာ အလွန်ပြင်းထန်သည့်အတွက် ဆေးရုံမရောက်မီပင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်းနှင့် ကျော်စိုး မဆုံးမီ သတိတစ်ချက် လည်လာချိန်တွင် "ပိတောက်ပန်းတွေ ပိတောက်ပန်းတွေ" ဟု ကယောင် ကတန်း ရေရွတ် ပြောနေခဲ့ကြောင်း ဆေးရုံ ပို့သူများက ပြန်ပြောပြသည်ကို ဝမ်းနည်းဖွယ် သိရှိရလေသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက် သက်ထားနှင့် ကျော်စိုးမှာ ချစ်သူများဖြစ်ပြီး ကျော်စိုးက သက်ထားအတွက် ပိတောက်ပန်း တက်ခူးပေးရင်း အပင်ပေါ်မှ ပြုတ် ကျ သေဆုံး ရသည်ဟု သူမတို့ တစ်မြို့လုံးက ထင်မြင် ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်။ သက်ထား မှာလည်း ကျော်စိုး တစ်ယောက် သစ်ပင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျပြီး ကျောက်တုံးနှင့် ဦးခေါင်းဆောင့်မိတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်လိုက်ရသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သူမကြောင့် လူတစ်ယောက် သေဆုံး ရသည်ဟုဆိုကာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်လှသောကြောင့် လည်းကောင်း တစ်လလောက် နေမကောင်းဖြစ်ရလေသည်။
သူမ နေမကောင်းဖြစ်နေသည့် ရက်များတွင် ကျော်စိုးသည် သူမထံသို့ ရောက်လာတတ်ပြီး သူ့အားမြုပ်နှံထားသည့် အုတ်ဂူတွင် ပိတောက်ပင်တစ်ပင် စိုက်ပေးပါရန် လာလာပြောသည်ဟု အိပ်မက် မက်လေ့ရှိသည်။ ထိုအိပ်မက်မှ နိုးလာတိုင်းလည်း သူမသည် ကြက်သီးများ ဖြန်းခနဲထကာ ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးမိလေသည်။ အစောတုန်းကတော့ စိတ်စွဲသဖြင့် တစ်ရက်တလေ မက်သည့်အိပ်မက်ဟု ထင်ခဲ့သော်လည်း နေ့စဉ် ရက်ဆက်လိုလို မက်နေသည့်အခါတွင်မူ သူမမှာ ထိတ်လန့်လာပြီး လူကြီးမိဘများကို ဖွင့်ပြောပြသည့် အခါတွင်တော့ အားလုံးက သက်ထား နေမကောင်းသဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကျော်စိုးကို စိတ်စွဲလမ်းနေခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း အိပ်မက် ကယောင်ခြောက်ခြား မက်နေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် သက်ထားမှာ အိပ်မက်မက်ပြီးတိုင်း ငိုကြွေးလို့သာ နေသဖြင့် သက်ထားနေကောင်းလျှင် ကျော်စိုးအုတ်ဂူမှာ ပိတောက်ပင်တစ်ပင် သွားစိုက်ပေး ကြမည်ဟု ကတိပေးကာ သူမ နေကောင်းသည့်နောက် အိမ်က လူများ အစီအစဉ်ဖြင့် ကျော်စိုး မိဘများကို ခွင့်တောင်းကာ ပိတောက်ကိုင်းခပ်ကြီးကြီးကို ကျော်စိုး၏ အုတ်ဂူဘေးတွင် သွားရောက်စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ကြသည်။
ပိတောက်ပင် စိုက်ပြီးသည့်နောက်တွင် အိပ်မက်မက်ခြင်း မရှိတော့သည့်အတွက် သက်ထားမှာ စိတ်သက်သာရသော်လည်း လူတိုင်းက သူမနှင့်ကျော်စိုးကို ချစ်သူတွေဟု အထင်မှား ကြသည်ကို ဖြေရှင်း ချင်စိတ် မရှိဘဲ ဒီအတိုင်း ထားလိုက်တော့သည်။ ကျော်စိုးအုတ်ဂူတွင် သွားရောက် စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ပိတောက်ကိုင်းမှာ ၂နှစ်ခန့်တွင် အပွင့်များ စပွင့်တော့သည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ ထိုပိတောက်ပင်မှ ပိတောက်ပန်းပွင့်လေတိုင်း သက်ထားအခန်းထဲတွင် ပိတောက်ပန်းရနံ့ကို ရတတ်သည်။ ပထမတော့ သူမ စိတ်ထင်၍ဟု ထင်ခဲ့သော်လည်း အုတ်ဂူဘေးမှ ပိတောက်ပွင့်တိုင်း သူမနှာခေါင်းထဲတွင် ပိတောက်နံ့ကို အမြဲလိုလို ရလာတတ်သည်။ သူမ မိသားစုများကို ပြောပြတော့လည်း စိတ် အစွဲအလန်းကြောင့် ဖြစ်သည် ဟုသာ ပြောတတ်ကြပြီး သူမ ညီမ ကေသီကလွဲ၍ မည်သူကမျှ မယုံကြည်ကြပေ။ သို့သော် ပိတောက်ပန်းနံ့ကို တစ်ခန်းလုံး မွှေးနေအောင် ရသည့်အခါတိုင်း သုဿန်ကို သွားပြီး ကြည့်လျှင် ကျော်စိုးအုတ်ဂူမှ ပိတောက်ပန်းများ ပွင့်နေသည်မှာ ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရလေသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ လည်း တစ်နှစ်ထဲ မဟုတ်ဘဲ ပိတောက်ပွင့် ချိ်န် ရောက်တိုင်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သက်ထားတစ်ယောက် ကြုံရလေ့ ရှိသည့် အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ဖြစ်လာလေသည်။
တစ်မြို့လုံး ထင်မြင်ယူဆနေသလို သက်ထားနှင့် ကျော်စိုးမှာ ချစ်သူရည်းစားများ လုံးဝ မဟုတ်ကြဘဲ ကျော်စိုးဘက်ကသာ သူမကို ချစ်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်း သက်ထား အသိဆုံးဖြစ်သော်လည်း သူမ မဖြေရှင်းချင်တော့ပါ။ ပိတောက်ပွင့်ချိန်တိုင်း သူမအခန်းတွင် ပိတောက်ပန်းနံ့လေးများ ရောက်ရောက် လာတတ်သည်မှာ ကျော်စိုးတစ်ယောက် ယခုအချိန်ထိ သူမကို စိတ်စွဲလန်းနေတုန်း၊ မကျွတ်မလတ် ရှိနေတုန်းဟု သူမ ယုံကြည်မိသည်။ ပြီးတော့လည်း ကျော်စိုးတစ်ယောက် ပိတောက်ပင်မှ လိမ့်ကျပြီး သေဆုံးရခြင်းသည် သူမကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမသာ ပိတောက်ပန်း မခူးခိုင်းလျှင် ကျော်စိုး တစ်ယောက် ခုလို အသက်သေဆုံးရမည် မဟုတ်ဟု ယူကျုံးမရဖြစ်ကာ သူမတွင် အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံယူမိသည့်အတွက် ကျော်စိုးသေဆုံးပြီး ယခု ၇နှစ်ခန့် ကြာသည်ပင်လျှက် သက်ထားမှာ သူမကို ချစ်ခင်ပိုးပန်းသော မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ နေလာခဲ့သည်။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို လက်ခံရလောက်လည်း သူမ စိတ်ထဲတွင် ကျော်စိုးနှင့် ပတ်သက်၍ လိပ်ပြာ မသန့်နိုင်အောင် ခံစားမိလေသည်။
သူမ အလွန်ချစ်ခဲ့သော ပိတောက်ပန်းကို ယခုအခါတွင် မကြည့်ချင် မမြင်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်မိသလို ပိတောက်တွေပွင့်ချိန်တိုင်း ရောက်လာတတ်သည့် ပိတောက်နံ့များကို သူမမုန်းပါသည်။ ပိတောက်ပန်းကို လိုချင်စိတ်ကြောင့် လူတစ်ယောက်လုံး အသက်ဆုံးရှုံးရစေသည့် သူမကိုယ်သူမလည်း မုန်းတီးမိသည်။ သူမအခန်းတစ်ခုလုံး ပိတောက်ပန်းနံ့များ လွှမ်းနေအောင် ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည့် တစ်စုံတရာကိုလည်း သူမ ထိတ်လန့်မိသည်။ ထိုအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ချင်မိသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးသည် ကိုလည်း နာကျင်မိသည်။ တကယ်တမ်းတော့ ထိုအဖြစ်အပျက်ဆိုး၊ အိပ်မက်ဆိုးမှ သူမ လွတ်မြောက် လိုလှပါသည်။ ပိတောက်ပန်း မရှိသည့်အရပ်ကို ထွက်သွားဖို့ အကြိမ်ကြိမ် စိတ်ကူးမိသော်လည်း မိဘများက ခွင့်မပြုသောကြောင့် ဒီမြို့ကနေ မထွက်ခွာနိုင်သော သူမအဖြစ်ကိုလည်း စိတ်ဆင်းရဲလှပါတော့သည်။
အကယ်၍များ သင်သည် ပိတောက်ပန်းပွင့်ချိန်၊ ဧပရယ်လမျိုးတွင် မြို့ကလေး တစ်မြို့ရှိ သုဿန်တစ်ခုအတွင်း ပိတောက်ပင်ကြီး တစ်ပင်အောက်မှ အုတ်ဂူဖြူဖြူလေးတစ်ခုဘေးတွင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေသူ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ပါက ထိုမိန်းခလေးမှာ သက်ထားဖြစ်သည်ကို သံယသဖြစ်စရာမရှိပါ။ သက်ထားတစ်ယောက် ပိတောက်ပန်းအိပ်မက်ဆိုး၊ ပိတောက် တစ္ဆေခြောက်ခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်အောင် သင့်ထံတွင် အကြံဥာဏ်ကောင်းများ ရှိပါကလည်း ပေးခဲ့စေချင်ပါကြောင်း အသိပေးလို ပါသည်။